February 19, 2015 - Written by Puntland Fox
Magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxaa maanta lagu soo gaba gabeeyay Tababar la xiriira ciyaaraha Kubadda Kolayga kaas oo loo qabtay macalimiin tababari doona kooxo ciyaara Kolayga.
Xaflad si heer sare ah loosoo agaasimay oo lagu qabtay dugsiga sare ee Boosaaso ayaa waxaa ka qeyb galay Masuuliyiin uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Bari C/samad Gallan, Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan iyo gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Bari Mustafe Majacase.
Tababarka loo qabtay macalimiintan baraneysa macalin nimada kubadda kolayga ayaa waxaa bixinayay qabiiro ku taqasusaqy ciyaaraha kubadda Kolayga soona ahaa ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya u ciyaari jiray ciyaartan kuwaas oo dhowaan soo gaaray gobolka.
Khudbado kala duwan oo si toos ah u taabaneysa ujeedka xaflada ayaa halkaas laga kala jeediyay, waxaana ka mid ahaa dadkii ugu horeyn hadlay gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Bari Mustafe Majacase, waxaana uu sheegay in uu ku faraxsanyahay tababarkan loosoo xiray macalimiintan isagoo u rajeeyay in waxyaabaha ay barteen ay dalka ugu shaqeyn doonaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari C/samad Maxamed Gallan, iyo duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan ayaa iyana goobta ka sheegay in ay diyaar la yihiin caawinta qabiirada bilaabay howshan iyo macaliminta sameyn doona tababarada ee maanta loo soo xiray baristii, waxaana ay sheegeen in ay u diyaarinayaan dhulkii lagu ciyaari lahaa hadiiba qalabkii iyo cilmigii heystaan.
Ugu dambeyntii gaba gabadii xaflada ayaa waxaa lagu gudoonsiiyay goobta shahaadooyin sharaf macalimiinta qaatay tababarka iyadoo goobta siweyn looga mahadceliyay qabiirada yimid gobolka ee tababarkan fuliyay.